I-Salkantay Trek eya e-Machu Picchu - I-Airbnb
I-Salkantay Trek eya e-Machu Picchu
Cusco, Peru/Cusco/Anta/Mollepata/Soraypampa, i-Peru
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Edwin Alberto
Izindawo zethu zokulala zingatholakala kuwo wonke umzila odumile we-Salkantay oya e-Machu Picchu. Inkonzo yethu yasebusuku yezinsuku ezi-4/3 iqala ngokuthi ulande ehhotela lakho lase-Cusco ukuya lapho uyoshiya khona e-Aguas Caliente. Ezindlini zethu zokulala ezi-3 ezisezintabeni eduze nomzila, sifaka ukudla kwasendaweni, okunomsoco kanye nokudla okumnandi futhi sihlinzekela zonke izintandokazi zokudla. Siphinde sihlanganise nokuthuthwa kojosaka bakho abakhulu kuze kube sekupheleni kwendlela.
Odinga ukuletha izingubo zakho zokushintsha!
Ngobusuku bokuqala, uzohlala e-Salkantay Lodges ngokubuka okukhethekile kweqhwa elihle lase-Salkantay.
Ngobusuku besibili, Uzovuka endaweni yomndeni ehlathini kanye nephunga lekhofi elisha endlini yendawo, egcwele isiko nesiko, ingasaphathwa, ukungenisa izihambi.
Ngobusuku besithathu, Uzolala phambi kwe-Machu Picchu endaweni yethu yokuhlala esibhakabhakeni enezindlu zengilazi… .. indawo epholile yokuthula. Uzobe usesimweni esihle sokuzwa umlingo namandla alesi simangaliso sasendulo… Uzomangala!…
umbhede oyidabulu engu- 1, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 usofa, imibhede yenetha engu-1
ubusuku obungu-7 e- Cusco
Uhambo lwethu lwezinsuku ezi-5 luyinto edlula ukuqwala izintaba e-Andes. Ukunethezeka nokuvikeleka kwezindawo zethu zokulala kanye namakhaya omndeni kuzokucwilisa esikweni lase-Andean futhi sabelane ngamasiko nendlela yokuphila yemindeni yethu yendawo.
Ibungazwe ngu-Edwin Alberto